भारत रिझाउन ओली आफैले बन्द गरेको भारतीय कार्यक्रम आफैले ब्युँताए « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७७, २३ श्रावण ०६:३०
-राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले सुरु गरेको कार्यक्रमले केपी शर्मा ओलीका पालामा पनि पायो निरन्तरता
– ‘नेपाल र भारतबीच अहिले कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था छ, यसलाई तोड्दै संवादको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको निर्णयले मद्दत पुग्नेछ ।’
– तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ को कदम चालेपछि प्रधानमन्त्री बनेका स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले सुरु गराएको कार्यक्रमको बजेट डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तीन करोडबाट पाँच करोड पुर्‍यायो । सोही बजेटलाई सरकारले अहिले निरन्तरता दिएको छ ।
भारतीय दूतावासले तल्ला तहमा सीधै खर्च गर्ने कार्यक्रमको म्याद सरकारले २० साउन ०८० सम्मका लागि थपेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय साना सहयोगको म्याद तीन वर्षलाई थप गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनामा ८० प्रतिशत भारतको सहयोग र २० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्नेछन् । भारतको सहयोगमा सरकारले कर छुट दिनेछ ।
नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएका वेला सरकारले भारतीय साना सहयोगको म्याद थपेको हो । ‘नेपाल र भारतबीच अहिले कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था छ, यसलाई तोड्दै संवादको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको निर्णयले मद्दत पुग्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
२१ कात्तिक ०६० मा पहिलोपटक दुई देशबीच भारतीय अनुदानमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थामार्फत तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ को कदम चालेपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए, थापा । ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको बजेट तीन करोडबाट पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो।
संविधान घोषणापछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएका कारण पनि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका वेलादेखि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । तर, सम्झौता भएर अगाडि बढिसकेका परियोजनाले निरन्तरता पाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले ती परियोजनाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने नयाँ व्यवस्थासहित चैत ०७६ देखि भारतीय साना सहयोग कार्यक्रम पुनः सुरु भएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीच गत चैतमा विद्यालय भवन निर्माणमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने समझदारीसँगै कार्यक्रमले पुनर्जीवन पाएको हो ।
तोकिएको मापदण्डअनुसार प्राप्त भएका ती परियोजना अर्थले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिस गरिएका सबैजसो आयोजना कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा भने यो सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुनेछ । ‘भारतीय दूतावासले यस वर्षलाई ४८ करोडको सिलिङ पठाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव क्षत्रीले भने, ‘६७ मध्ये तीनवटा परियोजना कार्यान्वयनमै गइसकेका छन् ।’
यस कार्यक्रमअन्तर्गत दूतावासले तल्ला तहमा मन्दिर, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई सीधै सहयोग दिनेछ । भारत सरकारको साना विकास परियोजना परिचालनका लागि सडक तथा पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत्, प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक सौर्यबत्ती, सामुदायिक विद्यालय भवन, नगर पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारका क्षेत्र तोकिएको कृष्ण रिजालले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।